WARBIXIN:- Qorshe ay damacsan yihiin seddaxda mas’uul ugu sareeysa dalka oo wal-wal laga muujiyay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
WARBIXIN:- Qorshe ay damacsan yihiin seddaxda mas’uul ugu sareeysa dalka oo wal-wal laga muujiyay
Waxaa saacihii ugu dambeeyay sii kordhayay wal-walka ay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ka qabaan qorshaha cusub oo ay wadaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo, ra’iisul wasaaraha uu soo magacaabay Xasan Cali Kheryre iyo guddoomiyaha baarlamaanka Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Qorshahaasi ayaa ah in markii maanta codka kalsoonida la siiyo ra’iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, in golaha wasiirada cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya aan lagu soo darin xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
Ilo xog-ogaal ah ay heleyso warbaahinta Bulshoweyn ayaa sheegaysa in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo, ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre iyo guddoomiye Jawaari ay maalmihii ugu dambeysay ka doodayeen qorshe culus oo ay ku doonayaan in golaha wasiirada ee xukuumadda cuusb lagu soo dhiso, taas oo ugu dambeyn ay isku afgarteen.
Qorshahaasi ayaa ah in golaha wasiirada cusub ee lasoo magacaabi doonno waxyar mooyee inta badan ee kale ay ka yimaadaan dibadda baarlamaanka federaalka Soomaaliya, iyadoona tirada wasiiradda ee xukuumadda cusub laga dhigi doonno 20 wasiir oo kaliya iyo wasiiro dowlayaal kooban.
Seddaxdaasi mas’uul ayaa sidoo kale isku raacay in qaabka awood qeybsiga golaha wasiirada uu noqdo mid isla eg, balse uusan noqon mid lagu qeybsado 4.5, sidii ay sameeysay dowladii hore uu madaweynaha ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud.
Ugu dambeyntii, ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa markii maanta la ansixiyo kadib wuxuu sida ugu dhaqsiyaha badan kusoo dhisi doonnaa xukuumad tayo leh, islamarkanaa ka tarjumeeysa shacabka Soomaaliyeed, waxaana markaasi kadib xukuumadaasi la horgeyn doonnaa golaha shacabka si codka kalsoonida loogu qaado.